Wasaaradda Gaashaandhiga dalka Maraykanka ayaa shaacisay in ay duqeyn ay diyaaradaheeda ka geysteen Soomaaliya iyo Libiya ku dileen saraakiil ka kala tirsan Al-Shabaab iyo Daacish. – STAR FM SOMALIA
Afhayeen u hadlay aqalka Pentagonka ayaa sheegay in 2dii bishan December 2015 ay duqeyn ka geysteen dalka Soomaaliya dadkii ku dhintey uu ka mid ahaa Cabdraxmaan Sandheere oo lagu naanaysi jirey Cukaash.
Afhayeenka Pentagonka Jeff Davis ma sheegin halka ay duqeynt ka geysteen hase yeeshee 2dii bishan December ayaa duqeyn ka dhacday deegaanka Kuunyo Barow ee ka tirsan gobolka Sh/hoose.
Illaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay ururka Alshabaab ee la xiriira duqeyntan, hase yeeshee waxaa soo baxay khilaaf ka dhex jira ururka Alshabaab kaasoo markii ugu horeysay sababay in mid kamid ah dagaalyahanada shisheeye ee ka tirsanaa ururka Alshabaab uu isu soo dhiibo dowlada Soomaaliya.
Ururka Alshabaab oo ku xoogan gobolka Jubbada dhexe ayaa waxaa laga soo sheegayaa in uu ka dhex jiro khilaaf ah taageerada ururka IS ee Siiriya iyo Ciraq ka jira.
Saraakiil ka tirsan Alshabaab oo isugu jira muwaadiniin Soomaali ah iyo qaar kale oo ajaanib ah ayaa lagu diley amaba ugaga baxsaday taageero ay u muujiyeen khilaafada Islaamka IS. Duqeyn xoog leh ayaa ka dhacay deegaanka Kuunyobarow 2dii bishan iyadoo illaa iyo hadda aanay jirin war ka soo baxay ururka Alshabaab ee la xiriirta duqeyntan.
Afhayeenka wasaarada Gaashaandhiga Maraykanka Jeff Davis ayaa ku tilmaamay dilka Cukaash inuu yahay dharbaaxo kulul oo ku dhacday Alshabaab.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in duqeyn laga fuliyay Libiya 13-kii bishii November lagu dilay Sarkaal ka tirsan Daacish oo lagu magacaabi jiray Wissam Najm Abd Zayd al Zubaydi oo sidoo kale loo yaqaano Abu Nabil.
Ma aha markii ugu horeysay ee ay wasaarada gaashaandhiga Maraykanku sheegtay inay mas’uul ka ahayd weerar gantaalo ah oo lagu qaaday dalka Soomaaliya.